Kedu ka Ngwọta Logistics Reverse nwere ike isi mee ka nlọghachi azụ n'ahịa E-azụmahịa | Martech Zone
Ọrịa COVID-19 dara na ahụmịhe ịzụ ahịa niile gbanwere na mberede na kpamkpam. Karịrị 12,000 Ụlọ ahịa brik na ngwa agha mechiri na 2020 ka ndị na-azụ ahịa na-akwaga ịzụ ahịa n'ịntanetị site na ntụsara ahụ na nchekwa nke ụlọ ha. Iji nọgide na-agbanwe àgwà ndị ahịa, ọtụtụ ụlọ ọrụ agbasawanyela ọnụnọ e-azụmahịa ha ma ọ bụ kwaga na mkpọsa n'ịntanetị na nke mbụ. Ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-enwe mgbanwe dijitalụ a na ụzọ ịzụ ahịa ọhụrụ, ha na-enwe mmasị na eziokwu dị n'okpuru na ka ahịa ịntanetị na-abawanye, otú ahụ ka nlọghachi.
Iji na-aga n'ihu n'ọchịchọ nke nhazi nlọghachi ndị ahịa, ndị na-ere ahịa ga-eji ngwa mgbagha siri ike, teknụzụ na-enyere aka ịhazi usoro nloghachi, wepụ ọrụ nloghachi aghụghọ, wee nweta oke uru. Ịgbalị ịfefe mmiri na-adịghị ahụkebe nke nhazi nloghachi nwere ike ịbụ usoro dị egwu nke chọrọ enyemaka nke ndị ọkachamara na ngwa ngwa n'èzí. Site n'iji a Sistemụ njikwa eweghachi (RMS) site na nkwalite visibiliti na ndị na-ere ahịa nleba anya dị elu nwere ike ijikwa nloghachi nke ọma, melite usoro ego ha na-enweta, ma kwalite ọkwa ndị ahịa.
Kedu ihe bụ Sistemụ Njikwa nlọghachi (RMS)?
Otu RMS n'elu ikpo okwu na-eji nke ukwuu configurable nloghachi nhazi workflows iji jikwaa na soro akụkụ ọ bụla nke njem ngwaahịa lọghachitere, site na mgbe a na-arịọ arịrịọ ruo mgbe etinyere ngwaahịa mbụ azụ na ngwaahịa ụlọ ọrụ ga-rere, na onye ahịa nloghachi nwere. emechaala.
Usoro a na-amalite site na mbido nloghachi, nke na-arụ ọrụ mgbe onye zụrụ ya rịọrọ nloghachi. Ebumnuche nke ngwọta RMS bụ iji hụ na ahụmahụ nlọghachi nke onye ahịa na-atọ ụtọ dịka usoro ịzụrụ ihe. Emebere usoro RMS iji nyere ụlọ ọrụ aka imeziwanye ọrụ ndị ahịa ha site na iji nkwukọrịta akpaaka iji nye ndị ahịa mmelite na nloghachi ha, nke na-ewepụ mkpa oku na-esochi na ozi-e nye ndị otu ndị ahịa.
Ozugbo arịrịọ a batara, ihe ngwọta ahụ ga-enye onye na-ere ahịa ihe ngosi na nghọta data n'ime ihe kpatara ya maka nloghachi ịkọ ụgwọ na oge metụtara nloghachi n'ọdịnihu ma nyochaa ihe ọ bụla na-adịghị ahụkebe, nke nwere ike ịghọgbu onye ahịa. Enwere ọtụtụ ụzọ onye na-azụ ahịa nwere ike isi megharịa wayo ma ọ bụ laghachi azụ, mana ha niile na-ebute otu nnukwu nsogbu maka ndị na-ere ahịa - -eri.
Amụma nkwụghachi ụgwọ n'iji ndị ahịa eme ihe na-efu ụlọ ọrụ ihe ruru $ 15.9 ijeri kwa afọ.
Ọhụụ enyere site na ngwọta RMS siri ike n'oge mmalite mmalite nke nloghachi nwere ike ịchekwa ndị ahịa n'ịntanetị ọnụ ahịa mbara igwe. Ozugbo eweghachitere nlọghachi ahụ, nzọụkwụ ọzọ bụ ịchọpụta ma ọnụ ahịa ngwaahịa eweghachiri adịchaghị ọnụ karịa ibughachi ya n'ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ ọrụ ahụ. Nke a dị oke mkpa maka azụmaahịa e-azụmahịa zuru ụwa ọnụ nke na-emekọ ọnụ ahịa mbupu dị elu. N'ọnọdụ ụfọdụ, azụmahịa nwere ike izipu onye ahịa ngwaahịa ọhụrụ wee gwa ha ka ha debe nke ochie. Igwe okwu RMS na-enye data achọrọ iji mee mkpebi ndị a.
Ụfọdụ ụlọ nkwakọba ihe na-ejupụta na nloghachi, ya mere ihe ngwọta RMS nwere ike ikpebi ebe kacha arụ ọrụ nke ọma dabere na mkpa ha na-eju afọ na otú ha si dị nso na ebe onye ahịa nọ. Ozugbo ahọpụtara saịtị ahụ, ngwaahịa a nwere ike ime nrụzi na nyocha ọ bụla echere na ọ dị mkpa tupu ọ dị njikere ịlaghachi na ngwa ahịa.
Nzọụkwụ ikpeazụ na usoro nloghachi bụ nsochi ngwugwu na mgbake. A na-emezi usoro nke ikpochapụ ihe mkpofu ngwaahịa, a na-emezi ihe ọ bụla dị mkpa na nrụzigharị, na nloghachi maka ma ndị ahịa na azụmahịa.
Ịmekọrịta ngwọta RMS nke njedebe na njedebe ga-enwe mmetụta na-adịgide adịgide na azụmahịa e-azụmahịa site n'echiche ego na ndị ahịa. Ngwa RMS na teknụzụ nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka imezu ihe ha chọrọ site n'ịba ụba oke uru, ibelata mfu ego sitere na nloghachi dị oke ọnụ, na imezi afọ ojuju ndị ahịa. Ka ndị na-azụ ahịa na-aga n'ihu na-anabata azụmahịa e-commerce, ikike RMS na-enye ndị na-ere ahịa udo nke uche dị mkpa iji nye ọrụ ndị ahịa dị mma ma rụọ ọrụ na-elekwasị anya na arụmọrụ ọnụ ahịa.
ReverseLogix bụ naanị usoro nchịkwa nkwụghachi azụ na njedebe, nke etiti, yana n'ụzọ zuru ezu wuru maka ụlọ ahịa, ecommerce, nrụpụta, na otu 3PL. Ma B2B, B2C ma ọ bụ ngwakọ, ikpo okwu ReverseLogix na-akwado, jikwaa ma na-akọ akụkọ banyere usoro ndụ niile na-alaghachi.
Ndị otu na-adabere na ReverseLogix na-ebuga oke elu ndị ahịa na-alaghachi ahụmahụ, chekwaa oge onye ọrụ site na iji usoro ọrụ ngwa ngwa, wee bulie uru site na nghọta 360⁰ n'ime data nloghachi.
Mụtakwuo maka ReverseLogix
Tags: 3 plb2b2cb2cecommerceecommerce laghachin'ichepụtangwugwu mgbakensochi ngwugwunsochi ngwugwu na mgbakeretail nloghachialaghachilaghachi ahụmahụna-alaghachi lọjistiknloghachi njikwa usorolaghachi nhazigbanwee ngwa ngwareverselogixrms
Gaurav Saran bụ CEO nke ReverseLogix, naanị onye na-enye usoro nchịkwa nkwụghachi azụ na njedebe, nke etiti, na nke zuru oke nke e wuru maka ụlọ ahịa, ecommerce, n'ichepụta na òtù 3PL. Tupu ịmalite ReverseLogix, Saran duziri ahịa ụlọ ọrụ maka ụlọ ọrụ Fortune 500 na Microsoft. O nweela ọkwa onye isi n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmalite, na-agbanwe ha nke ọma site na mmalite mmalite gaa na ụlọ ọrụ na-eto eto.